Maydadka Kalluumaysato Ajaanib ah oo laga helay xeebaha Somaliland
NAIROBI(P-TIMES)- Shabakadda Wararka Al-masdar Online ee laga leeyahay dalka Yemen ayaa ilo wareedyo gudaha ah waxa ay u sheegeen in 2 Kalluumaysato oo ka mid ahaa saddex kalluumaysato oo la la’aa ilaa dabayaaqadii bishii hore ee Janaayo laga helay Badda Calaamiga ee u dhaxaysa xeebaha Somaliland iyo Yemen ee Kaabiga ku haya gacanka Cadmeed oo marin muhiim ah u ah Kalluumaysatada.
Ilo wareedyada ayaa sheegay in Kalluumaysatadaasi inay dhowr maalmood ka hor u kalluumaysi u tageen xeebta magaalada Axwaar ee goboka Abyan ee Yemen si ay gutaan shaqo maalmeedkooda hase ahaatee la waayey markii dambe.
Markab nooca ganacsiga ah ayaa la sheegay inuu maydadkaasi ka helay dooni dul sabaynaysay meel ku dhow xeebta degmadda Shakra oo ku taala Badda xeebta Caraabi oo la aamnisanyahay in ay kusoo carisay.
Kalluumaysatada Yamanyiiinta ah ee maydadka la helay waxaa lagu kala sheegay Cali C/laahi Xasan oo 40-jir ahaa iyo wiilkiisa Saciid Cali oo 14-jir ah, kuwaas oo la la’aa tan iyo bishii lasoo dhaafay ee Janaayo 27-dii.
Dhinaca kalena Shabakadda Almasdar Online waxay kaloo qortay in weli la la’ yahay wiil 13-jir ah oo lagu magacaabi jirey Abu Bakar Fowzi Abu Bakar, kaas oo la socday doonida laga helay maydadka aabe iyo wiilkiisa.